Agence serivisy manerantany | Serivisy fandefasana entana any Shina Maneran-tany Souring & Trader
FAMINY LEG VOALOHANY Amazon FBA Fandefasana any amin'ny trano fitobiana Amazon FBA dia heverina ho fanafarana B2B mankany amin'ny firenena haleha. Any ivelan'i Shina ve ianao te handefa firaketana any amin'ny trano fanatobiana entana Amazon? Mety ho sosotra ianao fa ny mpanamboatra tsy mba manomana ny fandefasana FBA mihitsy ary mila manazava hatrany hatrany. Ary koa ny fanafarana iraisam-pirenena dia manahirana tokoa ary matetika no olana amin'ny aretin'andoha. Tonga hanampy anao izahay izao. Manome mpanjifa amin'ny serivisy fakana mpamily any amin'ny tanàna lehibe any Shina izahay, ...
Direct Line Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo loharanom-pitaterana an'habakabaka mahomby any Hongkong sy ireo mpandefa lozisialy logistika manerantany any amin'ny firenena eropeana sy Etazonia, SunsonExpress Direct Line dia serivisy fitambaram-bola sy paositra amin'ny fomba DDP (Declare Duty Paid). Mampiditra sidina mivantana avy any Hongkong mankany amin'ny vavahady itodiana isan'andro izahay ary mahazo ny fahazoan-dàlana amin'izany andro izany ihany. 100% ny fanaraha-maso feno ny entan'ny rivotra ary misy ny fandefasana kilometatra farany izay vahaolana ara-toekarena miaraka amin'ny fandefasana haingana izay ...
Vahaolana fandefasana paositra Fantatray tokoa fa ny vahaolana paositra dia safidy voalohany indrindra ho an'ny orinasa e-varotra satria mankafy ny taha ambany. Mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpivarotra isan-karazany dia miara-miasa amin'ny paositra maro izahay tato anatin'ny taona maro ary manala hatrany ny serivisy ratsy indraindray. Ankehitriny ny sisa no tsara indrindra. Ny China Post China Post dia mizara ho parcels ambonin'ny sy parcels voasoratra anarana. Izy io dia serivisy parsela iraisam-pirenena ho an'ny fonosana milanja ambany noho ny 2GG. Sina ...
Ny fandefasana serivisy Express amin'ny kaontinao manokana dia lafo loatra? Ka maninona raha alefa amin'ny volantsika? Manome serivisy ho an'ny mpanjifa izahay toa ny DHL, UPS ary EMS amin'ny fihenam-bidy. Fanaterana haingana kokoa amin'ny taha ara-toekarena, mendrika hampiasainao ianao. DHL dia sampana iray an'ny Deutsche Post DHL, vondrona paositra sy logista malaza eran'izao tontolo izao. Izy io dia ahitana an'ireto sehatr'asa manaraka ireto: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight ary DHL Supply Chain. Tamin'ny 1969, DHL nanokatra ny expre voalohany ...